Mwari Anoronga Kununura Vanhu Achishandisa Mesiya
Nharireyomurindi | October 2013
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | BHAIBHERI RINOMBOTAURA NEZVEI?
Mwari Anoronga Kununura Vanhu
Mwari akavimbisa Abrahamu ainge akatendeka kuti “mwana” akapikirwa aizobva mudzinza rake. Vanhu ve“marudzi ose” vaizokomborerwa kupfurikidza nemwana iyeye. (Genesisi 22:18) Jakobho muzukuru waAbrahamu akazotamira kuIjipiti, mhuri yake ndokukura kusvika yava rudzi rwakakura rwaIsraeri.
Nokufamba kwenguva, Farao wekuIjipiti aiva neutsinye akaita kuti vaIsraeri vave varanda vake kusvikira Mwari asarudza muprofita Mosesi, uyo akazotungamirira rudzi rwacho kubuda muIjipiti, ruchipfuura nemumvura yakakamuraniswa yeGungwa Dzvuku. Pashure peizvi, Mwari akapa vaIsraeri mitemo yake iyo yaisanganisira Mirayiro Gumi, kuti ivatungamirire nokuvadzivirira. Mitemo iyoyo yaitaura zvakajeka zvibayiro zvaidiwa kuti munhu akanganwirwe zvivi. Afemerwa naMwari, Mosesi akaudza vaIsraeri kuti Mwari aizovatumira mumwe muprofita. Muprofita wacho ndiye aizova “mwana” akavimbiswa.
Papera makore anopfuura 400, Mwari akavimbisa Mambo Dhavhidhi kuti “mwana” akafanotaurwa nezvake muEdheni aizotonga umambo hwaizogara nokusingaperi. Ndiye aizova Mesiya, Mununuri akasarudzwa naMwari kuti aponese vanhu, oita kuti nyika ino ivezve Paradhiso.
Nguva sezvayaifamba, Mwari akazivisa zvakawanda nezvaMesiya achishandisa Dhavhidhi nevamwe vaprofita. Vakafanozivisa kuti Mesiya aizozvininipisa uye aizova nemutsa, uye kuti pakutonga kwake aizopedza nzara, kusaruramisira uye hondo. Vanhu vose vaizogarisana zvakanaka kunyangewo nemhuka. Zvinhu zvinopesana nechinangwa chaMwari chepakutanga zvakadai sekurwara, kutambura uye rufu, zvaizopera uye vakafa vaizomutswa voraramazve panyika.
Mwari akafanotaura achishandisa muprofita Mika kuti Mesiya aizoberekerwa muBhetrehema uye achishandisa Dhanieri akazivisa kuti Mesiya aizourayiwa. Asi Mwari aizomutsa Mesiya kubva kuvakafa, omugadza kuti ave Mambo kudenga. Dhanieri akafanoratidzwa kuti pakupedzisira Umambo hwaMesiya hwaizobvisa zvachose dzimwe hurumende dzose, hwosara huchitonga. Mesiya akauya sezvakanga zvaprofitwa here?
—Inobva muna Genesisi, zvitsauko 22-50, uyewo Eksodho, Dheuteronomio, 2 Samueri, Mapisarema, Isaya, Dhanieri, Mika, Zekariya 9:9.
ZITA DZVENE RAMWARI
Zita rokuti Jehovha rinotanga kuwanika muBhaibheri pana Genesisi 2:4. Zita iri rakasiyana nemamwe rinowanika kanenge ka7 000 muzvinyorwa zviri mumitauro yakatanga kushandiswa pakunyora Magwaro Matsvene. Zvarinoreva zvokuti, “Anoita Kuti Zvinhu Zvive Sezvaanoda,” zvinotivimbisa kuti Mwari anonyatsokwanisa kuita zvose zvaanovimbisa uye zvinangwa zvake.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Anoronga Kununura Vanhu
NYAYA IRI PAKAVHA Nei Uchifanira Kufarira Bhaibheri?
NYAYA IRI PAKAVHA Vanhu Vakabva Kupi?
NYAYA IRI PAKAVHA Mwari Anoronga Kununura Vanhu
NYAYA IRI PAKAVHA “Tawana Mesiya”!
NYAYA IRI PAKAVHA Mashoko Akanaka Kuvanhu Vose
SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA “Jehovha Akakukanganwirai Nomwoyo Wose”
BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU “Vanhu Vakawanda Vaindivenga”
Ruvara Runoita Kuti Uite Sei?
Sei Zvapupu zvaJehovha Zvichiparidza Paimba Neimba?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?
Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?
NHARIREYOMURINDI Bhaibheri Rinombotaura Nezvei?